Ngokuqondene noSolomoni. 72 O Nkulunkulu, nika inkosi izinqumo zakho zokwahlulela,+Nendodana yenkosi ukulunga kwakho.+ 2 Kwangathi ingamela udaba lwabantu bakho ngokulunga+Nolwabahluphekile bakho ngesinqumo sokwahlulela.+ 3 Izintaba mazithwale ukuthula zikuyise kubantu,+Namagquma futhi, ngokulunga. 4 Mayahlulele abahluphekile kubantu,+Mayisindise amadodana ompofu,Futhi mayimchoboze umphambi. 5 Bayokwesaba uma nje kusenelanga,+Naphambi kwenyanga isizukulwane ngesizukulwane.+ 6 Iyokwehla njengemvula yehlela otshanini obugundiwe,+Njengezihlambi ezinkulu ezimanzisa umhlaba.+ 7 Ezinsukwini zayo olungile uyohluma,+Kanye nokuchichima kokuthula ize ingabe isaba khona inyanga.+ 8 Iyoba nezikhonzi kusukela olwandle kuze kube solwandle+Kusukela eMfuleni+ kuze kube semikhawulweni yomhlaba.+ 9 Abakhé ezifundeni ezingenamanzi bayokhothama phambi kwayo,+Nezitha zayo ziyokhotha uthuli.+ 10 Amakhosi aseTharishishi nawaseziqhingini+—Ayokhokha inkokhiso.+Amakhosi aseSheba nawaseSeba—Ayoletha isipho.+ 11 Wonke amakhosi ayowa ngobuso kuyo;+Zonke izizwe ziyoyikhonza.+ 12 Ngoba iyokhulula ompofu okhalela usizo,+Nohluphekile nanoma ubani ongenamsizi.+ 13 Iyohawukela ophansi nompofu,+Imiphefumulo yabampofu iyoyisindisa.+ 14 Iyokhulula umphefumulo wabo ekucindezelweni nasebudloveni,Igazi labo liyoba yigugu emehlweni ayo.+ 15 Mayiphile,+ futhi mayinikwe elinye legolide laseSheba.+Mayithandazelwe njalo;Mayituswe usuku lonke.+ 16 Kuyoba khona inala yokusanhlamvu emhlabeni;+Kuyoba khona ukuchichima esiqongweni sezintaba.+Isithelo sayo siyoba njengaseLebhanoni,+Futhi abavela emzini bayoqhakaza njengezimila zomhlaba.+ 17 Igama layo malihlale kuze kube nini nanini;+Igama layo malande phambi kwelanga,Futhi mabazibusise ngayo;+Zonke izizwe mazithi iyajabula.+ 18 Makatuswe uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli,+Okunguye yedwa owenza imisebenzi emangalisayo.+ 19 Futhi malituswe igama lakhe elikhazimulayo kuze kube nini nanini,+Inkazimulo yakhe mayigcwalise umhlaba wonke.+Amen, Amen. 20 Imithandazo kaDavide, indodana kaJese,+ isiphelile.